बामियान बुद्धको पुनर्निमाण हुदैछ
बुद्धको देशका हामी किन बुद्धु भइरहेका छौं । अरु देश पेट्रोल अथवा आफूसाग भएका कुरा बेचेर सम्पन्न भइरहेका छन् । हामी विश्वलाई शान्ति छरेर आफ्नो प्रगति हुने, सबैको तीर्थस्थल बन्न सकिने विशेषतामा समेत ध्यान दिइरहेका छैनौं । हामीसाग शान्तिदूतदेखि प्राकृतिक सुन्दरतासम्म छ, मान्छे नेपालमा आएर सुस्ताउन लालायित हुनसक्थ्यो, हामीले आफैलाई हेर्न, देख्न र चिन्न सकेनौं ।
अफगानिस्तानमा तालिवानको आतंककारी शासनले १९९६ मा पुरातात्वीक महत्वको बामियान बुद्धमूर्ति ७ हजार टुक्रा हुनेगरी ध्वस्तनष्ट बनायो । शासन कडा थियो होला, तर पुरातात्वीक महत्वको संरचना ध्वस्त पार्दा विश्वले नै आलोचना गरेको थियो । युनेस्को लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले बामियान बुद्धमूर्ति पुननिर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । यतिबेला मूर्ति जोडजाड पारेर पुननिर्माण भइरहेको छ ।
तालिवानले आइन्दा बामियान बुद्धमूर्तिको ऐतिहासिकता र सम्पदामा आक्रमण नगर्ने विश्वास गरिएको छ । वामियान बुद्धको मूर्ति विश्वकै अग्लो पनि हो ।
वीवीसीका अनुसार अमेरिका र अफगान तालिवानी समूहवीच यो मूर्तिबारे छलफल भएको छ । तालिवानी समूहले पहिलेजस्तो आक्रामक भएर बुद्धमूर्तिमाथि जाइनलाग्ने वचन दिएका छन् । बौद्धमार्गीका लागि यो सुखद खबर हो ।
अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बौद्ध गन्धार क्षेत्रमा बौद्धकालीन कला, संस्कृति र सम्पदाका अनेकन स्तम्भहरु छन् । तिनलाई संरक्षण गरेर राखिएको छ । पाकिस्तानी पुरातत्वविदहरु त नेपालमा आएर बौद्धदर्शन, लुम्बिनीबारे व्यापक अध्ययन गरेका थिए र निष्कर्षमा बुद्ध नेपालमा जन्मेको ठहर गरेका थिए । यद्यपि यही विषयलाई भारतले गोलमटोल तरिकाले बोल्ने गरेको छ ।
बुद्धबारे नेपालले विश्वव्यापी प्रचार गर्न सकेको छैन । माल पाएर के गर्नु चाल नपाएपछि भनेझैं बुद्धजस्ता महामानव हाम्रा हुन् तर ती महामानवको उचित प्रचार प्रसार गरेर नेपालको शान्तिमय छवि सुधार्नेतिर नेपाल सरकारले कहिले पनि ध्यान दिएको छैन । हामीले देशभित्रैका नीतिकार र नेता बसेर बुद्धबारे छलफल किन नगर्ने ? अव हामीले आफ्नै सम्पन्नताका लागि बुद्धको शान्ति र निर्वाणको विश्व प्रचार किन नगर्ने ? हामी मणि बोकेर ढुङ्गा व्यापार गरिरहेका छौं, आफैलाई चिन्ने कि ?